အကောင်းဆုံး အွန်လိုင်း (online) အဘိဓာန် ၉ ခု - Myanmar Network
အကောင်းဆုံး အွန်လိုင်း (online) အဘိဓာန် ၉ ခု
Posted by Language Republic on June 4, 2015 at 15:38 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
အင်္ဂလိပ်စကားလုံးများကို သင်နားလည်အောင် အကူအညီပေးနိုင်သည့် အွန်လိုင်း (online) အဘိဓာန်တွေကို web ပေါ်မှာဖြန့်တင်ထားတာတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ၎င်းတို့အထဲမှ အကောင်းဆုံး online အဘိဓာန် (၉) ခုကို အောက်မှာ ရွေးချယ် ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
Wikipedia စွယ်စုံကျမ်းစီမံကိန်းနှင့် တူညီသော သဘောတရားအပေါ် အခြေခံပြီးပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Wikitionary ကတော့ internet အသုံးပြုသူတွေပေါင်းပြီး ဘာကိုလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြတဲ့ နောက်ထပ်အထောက်အထားတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ Wikepedia နဲ့တူညီတဲ့ မည်သူမဆို page တစ်ခုကို တည်းဖြတ်နိုင်တာမျိုးစတဲ့ အားနည်းချက်တွေ အများကြီးပါဝင်သော်လည်း Wikepedia လိုပဲ Wikitionary မှာလည်း ၎င်းကိုတတ်နိုင်သမျှ တိတိကျကျဖြစ်ရန် ပြုလုပ်ဖို့ စိတ်ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ စာတည်းအုပ်စုတစ်စုရှိပါတယ်။ ၎င်းကိုအဓိကကျသော တစ်ခုပဲရှိတဲ့ ဇစ်မြစ်လို့ တော့ မသတ်မှတ်ပါနှင့်။ သို့သော် အကျိုးရှိရှိ အသုံးပြုမယ်ဆိုပါက သင့်လိုအပ်ချက်များ အတွက် အကောင်းဆုံးသော online အဘိဓာန်တစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Google Dictionary တွင် အသံထွက်များ၊ အဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်ချက်များ၊ ဥပမာ ၀ါကျများ၊ ဆက်စပ်လျှက်ရှိသော စကားစုများအပြင် တခြားသောအင်္ဂါရပ်များပါရှိသော ဘာသာစကားအမျိုးမျိုး ပါဝင်ပါသည်။ ၎င်းသည် အကျယ်ပြန့် ဆုံးနှင့် အကောင်းဆုံး online အဘိဓာန်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည့်အပြင် ခိုင်ခံ့သော အမျိုးအစားကောင်းအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခြင်းလည်း ခံထားရပါတယ်။ (Google chrome webstore တွင် download ရယူနိုင်ပါတယ်။)
၎င်းသည် online အဘိဓာန်တွေထဲက အကောင်းဆုံးနယ်ပယ်နာမည်ရှိတဲ့အပြင် အသုံးဝင်ဆုံး အဘိဓာန်တစ်ခုဖြစ်ပါ သည်။ ၎င်းသည် Ask.com နဲ့ တွဲနေပါတယ်။ ဒီလိုတွဲနေလို့ ၎င်းကိုအထင်မသေးလိုက်ပါနဲ့။ ၎င်းတွင် အဓိပ္ပါယ်သတ် မှတ်ချက်များ၊ အသံထွက်များ၊ စကားလုံးဇစ်မြစ်များနှင့် ကမ္ဘာ့သမိုင်းတို့ပါဝင်ပါသည်။ ၎င်းသည် အကောင်းဆုံးသော အလွယ်တကူလက်တွေ့အသုံးချနိုင်သည့် online အဘိဓာန်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
The Free Dictionary မှတစ်ဆင့် စကားလုံးများ၊ အက္ခရာစာလုံးများနှင့် စာပိုဒ်များကို ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။ ၎င်းတွင် အဓိပါယ်သတ်မှတ်ချက်မျိုးစုံ၊ ဝေါဟာရပဒေသာကျမ်း၊ ကံပုဒ်မရှိသော ကြိယာများ (Intransitive verb) နှင့် အသံထွက်များအပြင် အများသုံး ဘာသာစကားများဖြစ်သော ပြင်သစ်၊ ဂျာမန်နှင့်ဂရိအစရှိသော ဘာသာစကား များကို ဘာသာပြန်ပေးထားသော ဘာသာပြန်သည့် feature တို့ပါဝင်ပါသည်။ ၎င်းသည် ထူးခြားဆန်းပြားလှသည် တော့မဟုတ်ပါ။ သို့သော် သင့်အနေနဲ့ကလည်း ဆန်းပြားမှုကို ရှာဖွေနေတာဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာပါ။ ခြုံပြီးပြောရရင်တော့ The Free Dictionary သည် အကောင်းဆုံး online အဘိဓာန်တွေထဲက တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
5. Merriam – Webster Online
၎င်းသည် အများဆုံးအသိအမှတ်ပြုခြင်းခံရသော ပုံနှိပ်အဘိဓာန်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သင်အဆင်ပြေရန်အတွက် website လည်းထားရှိပါသည်။ ၎င်းကိုပုံမှန် အဘိဓာန်တစ်ခု၊ ဝေါဟာရ ပဒေသာကျမ်းတစ်ခု၊ စပိန်ဘာသာမှ အင်္ဂလိပ်ဘာသာသို့ ဘာသာပြန်ပေးသော ဘာသာပြန်တစ်ခုနှင့် ဆေးပညာဆိုင်ရာ အဘိဓာန်တစ်ခုတို့ဖြင့် ပြုလုပ်ထားပါသည်။ နှုန်းယှဉ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ ၎င်း၏အစီအစဉ်များက တော်တော်လေးကျဲပါသည်။ ဒါပေမဲ့ အထင်ကြီးလောက်သောနောက်ခံသမိုင်း ကောင်းကောင်းရှိသော online အဘိဓာန်ကိုရှာနေပါက Merriam- Webster online သည် သင်စိတ်ဝင်စားမည့် အဘိဓာန်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
Cambridge Dictionary ကတော့ အများကအသိအမှတ်ပြုထားတဲ့ နောက်ထပ်ပုံနှိပ်အဘိဓာန်ဖြစ်ပြီး ၎င်းနောက် တွင်များစွာသော မှတ်တမ်းများရှိပြီး ၎င်းနှင့်အရည်အသွေးတူသော online အဘိဓာန် လည်းရှိပါသည်။ Online မူကိုတော့ the Cambridge Dictionary of American English, the Cambridge Learner's Dictionary, the Cambridge Internatioanl Dictionary of Phrasal verbs နှင့် the Cambridge Internatioanl Dictionary of Idioms ဆိုတဲ့ အဘိဓာန်(၄)ခုနဲ့ ပြုလုပ်ထားပါတယ်။ သင့်အနေဖြင့် ပိုပြီးလေးနက်မှုရှိတဲ့ online အဘိဓာန်ကို ရှာဖွေနေတာ ဖြစ်ပါက ၎င်းသည် သင့်အနေဖြင့် စူးစမ်းလေ့လာ သင့်သော အဘိဓာန်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ဒီရုပ်ပုံဒီဇိုင်းများပါသော online အဘိဓာန်ကတော့ စကားလုံးတွေနဲ့ သဘောတရားတွေရဲ့ ဆက်စပ်ပုံကို သင်နားလည်အောင်ကို ပံ့ပိုးပေးမဲ့ ပုံများကို တီထွင်ထားပါတယ်။ တကယ့်ကို တမူထူးခြားတဲ့ အယူအဆဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင့်အနေနဲ့ ထူးခြားမှုကို ရှာနေတာဖြစ်ပါက Visuwords ကတော့ အကောင်းဆုံး online အဘိဓာန်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
Online ပေါ်မှာတွေ့ရတဲ့ အတိုကောက်စာလုံး(Acronyms) အများကြီးထဲက တချို့စကားလုံးတွေက ဘာကို ကိုယ်စားပြုသလဲဆိုတာ မသေချာဘူးလား? NetLingo က LOL၊ FWIW တို့အပြင် နောက်ထပ်မရှင်းလင်းသော internet စကားတွေက ဘာလဲဆိုတာကို ရှင်းပြပေးတဲ့ အကောင်းဆုံး online အဘိဓာန်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
သင်အကျွမ်းမ၀င်သေးတဲ့ ဗန်းစကားတချို့ကို ကြုံတွေရတဲ့အခါ ဒီအဘိဓာန်က အလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့ ကိရိယာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကို သင်ယူဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီအဘိဓာန်က online အဘိဓာန်တွေထဲက သင့်အတွက် အများဆုံးအကျိုးရှိစေနိုင်မည့် အဘိဓာန်ဖြစ်ပါတယ်။
Lifehack.org မှ MATT OKEEFE ရေးသားထားသော The 10 Best Online Dictionaries ကို ကိုးကားဘာသာပြန်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ရေးသားထားသော မူရင်းဆောင်းပါးကို ဒီနေရာမှာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
အင်ျဂလိပျစကားလုံးမြားကို သငျနားလညျအောငျ အကူအညီပေးနိုငျသညျ့ အှနျလိုငျး (online) အဘိဓာနျတှကေို web ပျေါမှာဖွနျ့တငျထားတာတှေ အမြားကွီးရှိပါတယျ။ ၎င်းငျးတို့အထဲမှ အကောငျးဆုံး online အဘိဓာနျ (၉) ခုကို အောကျမှာ ရှေးခယျြ ဖျောပွလိုကျပါတယျ။
Wikipedia စှယျစုံကမျြးစီမံကိနျးနှငျ့ တူညီသော သဘောတရားအပျေါ အခွခေံပွီးပွုလုပျခဲ့တဲ့ Wikitionary ကတော့ internet အသုံးပွုသူတှပေေါငျးပွီး ဘာကိုလုပျနိုငျတယျဆိုတာကိုဖျောပွတဲ့ နောကျထပျအထောကျအထားတဈခု ဖွဈပါတယျ။ Wikepedia နဲ့တူညီတဲ့ မညျသူမဆို page တဈခုကို တညျးဖွတျနိုငျတာမြိုးစတဲ့ အားနညျးခကျြတှေ အမြားကွီးပါဝငျသျောလညျး Wikepedia လိုပဲ Wikitionary မှာလညျး ၎င်းငျးကိုတတျနိုငျသမြှ တိတိကကြဖြွဈရနျ ပွုလုပျဖို့ စိတျဆုံးဖွတျထားတဲ့ စာတညျးအုပျစုတဈစုရှိပါတယျ။ ၎င်းငျးကိုအဓိကကသြော တဈခုပဲရှိတဲ့ ဇဈမွဈလို့ တော့ မသတျမှတျပါနှငျ့။ သို့သျော အကြိုးရှိရှိ အသုံးပွုမယျဆိုပါက သငျ့လိုအပျခကျြမြား အတှကျ အကောငျးဆုံးသော online အဘိဓာနျတဈခုဖွဈနိုငျပါတယျ။
Google Dictionary တှငျ အသံထှကျမြား၊ အဓိပ်ပါယျသတျမှတျခကျြမြား၊ ဥပမာ ၀ါကမြား၊ ဆကျစပျလြှကျရှိသော စကားစုမြားအပွငျ တခွားသောအင်ျဂါရပျမြားပါရှိသော ဘာသာစကားအမြိုးမြိုး ပါဝငျပါသညျ။ ၎င်းငျးသညျ အကယျြပွနျ့ ဆုံးနှငျ့ အကောငျးဆုံး online အဘိဓာနျမြားထဲမှ တဈခုဖွဈသညျ့အပွငျ ခိုငျခံ့သော အမြိုးအစားကောငျးအဖွဈ အသိအမှတျပွုခွငျးလညျး ခံထားရပါတယျ။ (Google chrome webstore တှငျ download ရယူနိုငျပါတယျ။)
၎င်းငျးသညျ online အဘိဓာနျတှထေဲက အကောငျးဆုံးနယျပယျနာမညျရှိတဲ့အပွငျ အသုံးဝငျဆုံး အဘိဓာနျတဈခုဖွဈပါ သညျ။ ၎င်းငျးသညျ Ask.com နဲ့ တှဲနပေါတယျ။ ဒီလိုတှဲနလေို့ ၎င်းငျးကိုအထငျမသေးလိုကျပါနဲ့။ ၎င်းငျးတှငျ အဓိပ်ပါယျသတျ မှတျခကျြမြား၊ အသံထှကျမြား၊ စကားလုံးဇဈမွဈမြားနှငျ့ ကမ်ဘာ့သမိုငျးတို့ပါဝငျပါသညျ။ ၎င်းငျးသညျ အကောငျးဆုံးသော အလှယျတကူလကျတှအေ့သုံးခနြိုငျသညျ့ online အဘိဓာနျတဈခုဖွဈပါသညျ။
The Free Dictionary မှတဈဆငျ့ စကားလုံးမြား၊ အက်ခရာစာလုံးမြားနှငျ့ စာပိုဒျမြားကို ရှာဖှနေိုငျပါသညျ။ ၎င်းငျးတှငျ အဓိပါယျသတျမှတျခကျြမြိုးစုံ၊ ဝေါဟာရပဒသောကမျြး၊ ကံပုဒျမရှိသော ကွိယာမြား (Intransitive verb) နှငျ့ အသံထှကျမြားအပွငျ အမြားသုံး ဘာသာစကားမြားဖွဈသော ပွငျသဈ၊ ဂြာမနျနှငျ့ဂရိအစရှိသော ဘာသာစကား မြားကို ဘာသာပွနျပေးထားသော ဘာသာပွနျသညျ့ feature တို့ပါဝငျပါသညျ။ ၎င်းငျးသညျ ထူးခွားဆနျးပွားလှသညျ တော့မဟုတျပါ။ သို့သျော သငျ့အနနေဲ့ကလညျး ဆနျးပွားမှုကို ရှာဖှနေတောဖွဈခငျြမှဖွဈမှာပါ။ ခွုံပွီးပွောရရငျတော့ The Free Dictionary သညျ အကောငျးဆုံး online အဘိဓာနျတှထေဲက တဈခုဖွဈပါတယျ။
၎င်းငျးသညျ အမြားဆုံးအသိအမှတျပွုခွငျးခံရသော ပုံနှိပျအဘိဓာနျတဈခုဖွဈပါသညျ။ သငျအဆငျပွရေနျအတှကျ website လညျးထားရှိပါသညျ။ ၎င်းငျးကိုပုံမှနျ အဘိဓာနျတဈခု၊ ဝေါဟာရ ပဒသောကမျြးတဈခု၊ စပိနျဘာသာမှ အင်ျဂလိပျဘာသာသို့ ဘာသာပွနျပေးသော ဘာသာပွနျတဈခုနှငျ့ ဆေးပညာဆိုငျရာ အဘိဓာနျတဈခုတို့ဖွငျ့ ပွုလုပျထားပါသညျ။ နှုနျးယှဉျကွညျ့မယျဆိုရငျတော့ ၎င်းငျး၏အစီအစဉျမြားက တျောတျောလေးကြဲပါသညျ။ ဒါပမေဲ့ အထငျကွီးလောကျသောနောကျခံသမိုငျး ကောငျးကောငျးရှိသော online အဘိဓာနျကိုရှာနပေါက Merriam- Webster online သညျ သငျစိတျဝငျစားမညျ့ အဘိဓာနျတဈခုဖွဈပါသညျ။
Cambridge Dictionary ကတော့ အမြားကအသိအမှတျပွုထားတဲ့ နောကျထပျပုံနှိပျအဘိဓာနျဖွဈပွီး ၎င်းငျးနောကျ တှငျမြားစှာသော မှတျတမျးမြားရှိပွီး ၎င်းငျးနှငျ့အရညျအသှေးတူသော online အဘိဓာနျ လညျးရှိပါသညျ။ Online မူကိုတော့ the Cambridge Dictionary of American English, the Cambridge Learner's Dictionary, the Cambridge Internatioanl Dictionary of Phrasal verbs နှငျ့ the Cambridge Internatioanl Dictionary of Idioms ဆိုတဲ့ အဘိဓာနျ(၄)ခုနဲ့ ပွုလုပျထားပါတယျ။ သငျ့အနဖွေငျ့ ပိုပွီးလေးနကျမှုရှိတဲ့ online အဘိဓာနျကို ရှာဖှနေတော ဖွဈပါက ၎င်းငျးသညျ သငျ့အနဖွေငျ့ စူးစမျးလလေ့ာ သငျ့သော အဘိဓာနျကွီးတဈခုဖွဈပါတယျ။
ဒီရုပျပုံဒီဇိုငျးမြားပါသော online အဘိဓာနျကတော့ စကားလုံးတှနေဲ့ သဘောတရားတှရေဲ့ ဆကျစပျပုံကို သငျနားလညျအောငျကို ပံ့ပိုးပေးမဲ့ ပုံမြားကို တီထှငျထားပါတယျ။ တကယျ့ကို တမူထူးခွားတဲ့ အယူအဆဖွဈပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ သငျ့အနနေဲ့ ထူးခွားမှုကို ရှာနတောဖွဈပါက Visuwords ကတော့ အကောငျးဆုံး online အဘိဓာနျတဈခု ဖွဈပါတယျ။
Online ပျေါမှာတှရေ့တဲ့ အတိုကောကျစာလုံး(Acronyms) အမြားကွီးထဲက တခြို့စကားလုံးတှကေ ဘာကို ကိုယျစားပွုသလဲဆိုတာ မသခြောဘူးလား? NetLingo က LOL၊ FWIW တို့အပွငျ နောကျထပျမရှငျးလငျးသော internet စကားတှကေ ဘာလဲဆိုတာကို ရှငျးပွပေးတဲ့ အကောငျးဆုံး online အဘိဓာနျတဈခုဖွဈပါတယျ။
သငျအကြှမျးမဝငျသေးတဲ့ ဗနျးစကားတခြို့ကို ကွုံတှရေတဲ့အခါ ဒီအဘိဓာနျက အလှနျတနျဖိုးရှိတဲ့ ကိရိယာဖွဈပါတယျ။ အဲဒါကို သငျယူဖို့လိုအပျတယျဆိုရငျတော့ ဒီအဘိဓာနျက online အဘိဓာနျတှထေဲက သငျ့အတှကျ အမြားဆုံးအကြိုးရှိစနေိုငျမညျ့ အဘိဓာနျဖွဈပါတယျ။
Lifehack.org မှ MATT OKEEFE ရေးသားထားသော The 10 Best Online Dictionaries ကို ကိုးကားဘာသာပွနျထားခွငျးဖွဈပါတယျ။
အင်ျဂလိပျဘာသာဖွငျ့ ရေးသားထားသော မူရငျးဆောငျးပါးကို ဒီနရောမှာ ဖတျရှုနိုငျပါတယျ။
Permalink Reply by Vnerable Ca Kka on June 10, 2015 at 9:14
Permalink Reply by zaw myo aung on June 12, 2015 at 15:40
I will first use google dictionary now .
Permalink Reply by Aung Soe Oo on June 12, 2015 at 22:31
Permalink Reply by aungzawoo on June 12, 2015 at 23:16
Please.Tell me.How to join
Permalink Reply by sweswewin on June 13, 2015 at 9:20
please tell me how to joy .
Permalink Reply by TIN MAR LYNN on June 13, 2015 at 10:28
Permalink Reply by AshinDamahar Nanda on June 14, 2015 at 7:51